24 N’ụbọchị ya, Nebukadneza+ eze Babịlọn gbagotere, Jehoyakim wee bụrụ onye na-ejere ya ozi+ ruo afọ atọ. Otú ọ dị, ọ tụgharịrị wee nupụrụ ya isi.
2 Jehova wee malite izite ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ndị Kaldia+ ka ha na-awakpo ya, na-ezitekwa ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ndị Siria na ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ndị Moab+ na ìgwè ọ lụọ ọ gbalaga ụmụ Amọn, o wee na-ezite ha ka ha na-awakpo Juda iji bibie ya, dị ka Jehova kwuru+ site n’ọnụ ndị ohu ya bụ́ ndị amụma.
3 Ihe mere ihe a ji mee Juda bụ naanị na Jehova kwuru na ọ ga-eme, iji wepụ+ ya n’ihu ya n’ihi mmehie Manase,+ dị ka ihe niile o mere si dị;
4 nakwa n’ihi ọbara na-emeghị ihe ọjọọ+ ọ wụfuru, o wee mee ka Jeruselem jupụta n’ọbara na-emeghị ihe ọjọọ, Jehova ekweghịkwa ịgbaghara ya.+
5 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Jehoyakim+ na ihe niile o mere, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Juda?
6 N’ikpeazụ, Jehoyakim sooro nna nna ya hà dinaa,+ Jehoyakin nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
7 Ọ dịghịkwa mgbe ọzọ+ eze Ijipt pụtara n’ala ya,+ n’ihi na eze Babịlọn weere ihe niile bụ́ nke eze Ijipt,+ malite na ndagwurugwu+ Ijipt ruo n’osimiri Yufretis.+
8 Jehoyakin+ gbara afọ iri na asatọ mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara ọnwa atọ na Jeruselem.+ Aha nne ya bụ Nehọshta ada Elnetan onye Jeruselem.
9 O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova, dị ka ihe niile nna ya mere si dị.+
10 N’oge ahụ, ndị na-ejere Nebukadneza eze Babịlọn ozi gbagotere na Jeruselem, ha wee nọchibido obodo ahụ.+
11 Nebukadneza eze Babịlọn wee buso obodo ahụ agha, mgbe ndị na-ejere ya ozi nọchibidoro ya.+
12 E mesịa, Jehoyakin eze Juda nyefere onwe ya n’aka eze Babịlọn,+ ya na nne ya+ na ndị na-ejere ya ozi na ndị o mere ndị isi na ndị na-eje ozi n’obí ya; eze Babịlọn wee kpụrụ ya laa n’afọ nke asatọ+ nke ọchịchị ya.
13 O wee si n’ebe ahụ wepụta akụ̀ niile dị n’ụlọ Jehova na akụ̀ ndị dị n’ụlọ eze,+ o wee gburisịa arịa ọlaedo niile+ Sọlọmọn eze Izrel mere n’ụlọ nsọ Jehova, dị nnọọ ka Jehova kwuru.
14 O wee dọrọ Jeruselem dum n’agha,+ tinyere ndị isi niile+ na ndị dimkpa niile bụ́ ndị dike+—puku mmadụ iri ka ọ dọọrọ n’agha—nakwa onye ọ bụla bụ́ omenkà+ na onye na-ewu mgbidi siri ike. Ọ dịghị onye a hapụrụ ma e wezụga ndị ọ na-enweghị ka ọ hà ha+ n’ime ndị ala ahụ.
15 Otú a ka o si dọrọ Jehoyakin+ n’agha laa Babịlọn;+ o wee si na Jeruselem kpụrụ nne eze+ na ndị nwunye eze na ndị na-eje ozi n’obí ya+ na ndị isi ala ahụ ka ha bụrụ ndị a dọọrọ n’agha laa Babịlọn.
16 Ma ndị dike niile, ndị dị puku asaa, na ndị omenkà na ndị na-ewu mgbidi siri ike, ndị dị otu puku, ndị dike niile na-ebu agha, ka eze Babịlọn kpụụrụ ka ha bụrụ ndị a dọọrọ n’agha laa Babịlọn.+
17 Eze Babịlọn+ mekwara Matanaya bụ́ nwanne nna ya+ eze n’ọnọdụ ya. O wee gbanwee aha ya ka ọ bụrụ Zedekaya.+
18 Zedekaya gbara afọ iri abụọ na otu+ mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara afọ iri na otu na Jeruselem. Aha nne ya bụ Hamutal+ ada Jeremaya onye Libna.
19 O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova, dị ka ihe niile Jehoyakim mere si dị.+
20 N’ihi na ihe mere na Jeruselem nakwa na Juda kpasuru Jehova iwe+ ruo mgbe o wepụrụ ha n’ihu ya.+ Zedekaya wee malite inupụrụ eze Babịlọn isi.+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D12%26Chapter%3D24%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl